Banyere Anyị - Guangzhou Zeno Electronics Co., Ltd.
Guangzhou Zeno Eletrọniki Co., Ltd.
Anyị naotu ụlọ ọrụ na-elekwasị anya na R & D, mmepụta na ire ahịa nke ngwa ọdịyo. Anyị na-agụnye R & D, teknụzụ, mmepụta, ogo, ahịa, ọrụ na-ere ahịa na ngalaba ndị ọzọ yana ọtụtụ narị ndị ọrụ. Anyị abụrụla ọkachamara na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ ngwa ngwa ọdịyo na-ahụ anya site na ọtụtụ afọ na-arụsi ọrụ ike, ndị ọrụ magburu onwe ha na itinye ego na ngwa ọrụ dị elu, na-enye ọnụahịa asọmpi site na iji usoro kachasị ọhụrụ na teknụzụ jikọtara ya na ngwaahịa dị elu ， anyị jisiri ike ịchịkwa usoro teknụzụ niile: malite na ịmepụta ngwaahịa anyị. Ngwaahịa anyị niile gafere ule siri ike na mmepe ngwaahịa, tupu enye ha maka ire ere. ma debe ụkpụrụ kachasị elu maka mmepụta na gburugburu ebe ọrụ. Nzaghachi ndị ahịa na ngwaahịa na-enye anyị nri ozugbo maka ndozi ngwaahịa n'ọdịnihu.
Nke anyiisi ngwaahịa bụ TV brackets, projector brackets, desktọọpụ brackets, video ogbako mobile adọkpụ, ergo ụlọ ọrụ ngwọta. na ngwaike ndị ọzọ metụtara ya. Branddị anyị aghọwo ama ama na ụlọ ọrụ. N'ihe banyere ire ere, a ga-ekewa ya n'ime ahịa ụlọ na mbupụ.
Nweimewe otu, ahaziri ahịa si mbukota, ngwa ngwa na n'ụzọ ziri ezi chọta ahịa mkpa ， e n'ichepụta na-ekesa elu-edu arịọnụ ngwọta maka TVs. Approachzọ a na-ewepu ọnụ ahịa onye etiti ma ọ bụ nke ndị na-ere ahịa, nke na-enye anyị ohere ịnyefe ndị ahịa anyị ego. anyị na-eresịkwa ndị ahịa buru ibu na ntanetị dịka Amazon na Walmart.
Anyị chọrọ ka ịnụ ụtọ ngwa ọhụrụ gị ozugbo enwere ike na-enweghị ọtụtụ ụgwọ agbakwunyere, na ụzọ ọzọ ị ga-esi kwuo, "Daalụ!". Anyị nwere ekele maka nkwado gị na-aga n'ihu, anyị ga-anọgide na-agba mbọ maka ụzọ isi nyefe ndị ọbịa anyị a ma ama ego ọzọ. Mee ka anyị mata ka ngwa ọrụ ọhụụ gị si arụ ọrụ maka gị!
Anyị nwere ọtụtụ n'ógbè elekọta mmadụ na ndị nkesa niile China, otú ahụ tozuru okè ma mụ anụ ụlọ nkesa e guzobere.
Anyị na-aghọta mkpuchi zuru oke nke netwọkụ na ntanetị na-adabere na ikpo okwu e-commerce dị ike ịntanetị ebe anyị na-arụsi ọrụ ike na ụlọ ọrụ e-azụmahịa a ma ama dịka JD.com, Tmall, Taobao, Suning na Pinduodu